Agaasime waaxeedyo ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo xilalka la wareegay – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Agaasime waaxeedyo ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo xilalka la wareegay
Xarunta wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay munaasabad xilalka ay kula wareegayaan agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada iyo hay’addaha iyo agasimaha horumarinta macalimiinta wasaaradda waxbarashada.
Munaasabadda ayaa waxaa goob joog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada XFS Xasan Maxamed Cali ayaa goob joog ka ahaa.
Cabdi Nuur Axmed Jaamac agaasimaha xiriika maamul gobaleedyada iyo hay’adaha ayaa xilka kala wareegay Ismaaciil Maxmed Cali , Axmed Muuse Xoosh agaasimaha horumarinta macalimiinta ayaa xilka kala wareegay Hibo kaamil.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada XFS Xasan Maxamed Cali ayaa kula dardaarmay agaasimayaasha xilka lawareegay in ay si daacad ah u gutan waajibaadka loo igmaday.
“Maanta waxaad lawareegteen waajibaad culus oo ubaahan kaf akar iyo in aad howlaha aad masuulka katihiin aad u qabataan si dacadnimo ku jirto waxaan rajeynaa in agaasimayaashii idinka horey sidey wax u qaban jireen inaad u qabataan”ayuu yiri agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali.
Agaasimayaasha cusub ee maanta xilka la wareegay ayaa ballan qaaday inay ka soo dhalaali doonaan howsha loo igmaday.